Maamulka Puntland oo ka hadley dilalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka Bari – SBC
Maamulka Puntland oo ka hadley dilalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka Bari
Maamulka Puntland ayaa manta ka hadlay Dilal is daba jooga oo ka dhacay labadii malmood ee ugu danbeeyay Gobolka Bari kadib shirkoodii golaha Wasiirada ayna ku sheegeen in uu dibu soo cusboonaday Dagaladii u dhaxeyay Beelo wada Dega Deganka Bosaso iyo Kobdhexaad oo kawada tirsan Gobolka Bari oo ka dhashay khasare nafeed hadana ay socoto hub Urursi labada belood sida uu shir Jara’d ku sheegay Wasirka Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose Gen C/laahi Axmed jamac Ilka Jiir oo shirkii golaha WASiiarada Kadib saxaafada la hadley.
Puntland waxaa ay ku edaysay Dagaaladaan soo noqnoqaya ee Belaha DegaBari in ay ka danbeeyaan Gacmo kale shacabkana ugu baqeen in ay ka Fejignadan.
Wasirka Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha hoose Gen C/laahi Axmed Jamac Ilka jiar ayaa ku timamay Taboobin ay Maamulku horay ay u qaboojiyeen Go’aamana ay uga soo sareen in ay soo noqnoqdaan Nasiib daro.
Sidoo kale waxaa Lagu soo qaaday Shirkii jaraa’id ee Gobolka Sanaag Bari oo dhawanahan degamo ka tirsan laga soo shegayay in ay Puntland ay ka jartay Rashinkii dadka Degaankaasi ay ka gadan jireen Bososo, ay ku tilmamaeen Sababo amaan awgood.
Coladahan soo noqnoday ee Belaha Wada degan Meelo ka tirsan Gobolka Baro ayaa waxaa Baaqyo ka soo saray Marka laga yimado Maamulka Puntland waxgaradka odayaasha isimada iyo siyasiyiin in la joojiyo si ay u baaqdaan Dhiig danbe oo daatay.
Juun 21, 2011 at 10:14 pm
war mala la’yahay mid dadka isku keena dhiiro geliya baruurujiya umadda way is dhiibtay yaad isku halaynaysaan reer puntlandow tashada oo kaca oo damiir laawaha iska qabta.bosaso miyaa laga la’yahay rag sida walalaha Galkacyo oo kale waa in lagu dayadaa oo lagu tusaalo qata.